Tratry ny taona 2017 Motivational Quotes Tratry ny taona 2017 Motivational Quotes
Tratry ny taona 2017 Motivational Quotes
Hanomboka amin'ny taona vaovao ny antony manosika ny sasany nalaina. Manana be dia be izy ireo ho anao. Iny ianao no lasa!
Eto dia hangataka tena sambatra sy miroborobo ny taona vaovao ny olona izay mitondra tanamasoandro ny fianakaviana foana.
Taona vaovao 2017 Motivational Best Quotes
Enga anie ny andro ho toy ny glittery toy ny diamondra, Mety ny namany ho toy ny tsara toy ny volamena, aoka ny fonao hijanona ho maitso toy ny emeraoda, ary aoka ny fanahinareo hijanona ho madio toy ny perla.
Enga anie ianao Happy Taom-baovao avy amin'ny foko manontolo aho. Andriamanitra anie hanome anao ny fahasambarana sy ny hery handresena ny taon-dasa tsy fahombiazana.
Enga anie ianareo hitokana ny Taom-baovao ny olombelona sy ny fanatsarana izao tontolo izao amin'ny ankapobeny.
Ten, sivy, valo, Fito, enina, dimy, efatra, telo, roa, iray, hurray! Ny New Year efa! Ankafizo entana ary manana fotoana be mialoha.
Aho nahita ny fitiavana, fahasalamana, fiadanana sy fifaliana. Te maharitra an-trano. No nanolotra azy ireo ny adiresy. Manantena izy ireo tonga ny am-baravarana ity Taona Vaovao.
Isika dia hanokatra ny boky. Ny pejy banga. Tiantsika ny hanolo-teny azy tenantsika. Ilay boky dia antsoina hoe Opportunity sy ny toko voalohany dia ny Taom-baovao Day. - Edith Lovejoy Pierce
Ny fahombiazana sy ny fahasambarana lainga ao anatinareo. Hanapa-kevitra ny hitandrina sambatra, sy ny fifaliana ary ianao dia mamorona ny tsy mety resy miaramilany hamely olana. - Helen Keller
Misy zavatra lehibe kokoa mba ho tratra amin'ny isan New Year, ary ny tsirairay ary ny olona rehetra dia tsy maintsy manomana ny tenany ho lehibe, tsy ny tenin 'ny vava, fa be dia be ny sorona. - Michael Bassey Johnson
"Enga anie ny Taona Vaovao hanome anao ny hery hiatrehana ny zava-tsarotra eo amin'ny fiainana sy herim-po mba manitsy ny lay, mba haka toe-javatra rehetra ny ezaka."
"Ny Taona Vaovao mamy ho anao 365 andro mba milalao - mameno azy amin'ny na inona na inona irin'ny fonao mba tsy nenina any amin'ny faran'ny ny tsingerin'ny isan-taona. "
Best New Year 2017 Quotes
"Fa tamin'ny taona lasa ny tenin'i an'i tamin'ny taona lasa ny teny. Ary ny taona manaraka ny tenin'i miandry feo iray hafa. "- T.S. Eliot, efatra Quartets
Ny taom-baovao mitsangana eo anoloantsika, tahaka ny toko ao amin'ny boky, miandry ny ho voasoratra. Afaka manampy manoratra izany tantara izany amin'ny alalan'ny fametrahana tanjona. - Melody Beattie
Taona vaovao 2017 nalaina no tsara indrindra amim-behivavy sy tokony ho mendrika ny tifitra!